प्रधानमन्त्री ओली नाङ्गै सडकमा हिँडिरहनु भएको छ । सडक प्रतिपक्षको हो ? गगन थापा '' पूरा पढ्नुहोस। - News21Nepal
प्रधानमन्त्री ओली नाङ्गै सडकमा हिँडिरहनु भएको छ । सडक प्रतिपक्षको हो ? गगन थापा ” पूरा पढ्नुहोस।
December 14, 2020 news21nepalLeaveaComment on प्रधानमन्त्री ओली नाङ्गै सडकमा हिँडिरहनु भएको छ । सडक प्रतिपक्षको हो ? गगन थापा ” पूरा पढ्नुहोस।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सडकमा नाङ्गै हिँडिराखेको आरोप लगाएका छन्।कैलालीमा आज सरकारविरूद्ध कांग्रेसले गरेको प्रद-र्शनमा थापाले भने, ‘प्रधानमन्त्री नाङ्गै सडकमा हिँडिरहनु भएको छ। हामीले भन्दा लागेन। अहिले प्रचण्ड र माधव नेपालले भनिरहनुभएको छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहयोग गर्ने प्रचण्ड र माधव नेपाल पनि नाङ्गै हिँडिराखेको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई कहिले अगाडि त कहिले पछाडि बोक्दा उहाँहरूले (प्रचण्ड र माधव नेपाल) आफू पनि नाङ्गिएको थाहा पाउनुभएन,’ उनले भने। सांसद थापाले ओली सरकारका पालामा भ्रष्टाचार बढेको बताए। भ्र ष्टचारी खोज्न बालुवाटार र सिंहदरबारमा गए पुग्ने उनले बताए। ‘भ्र ष्टाचारी खोज्न कहीँ जानु पर्दैन, बालुवाटार गए पुग्छ। सिंहदरबार गए पुग्छ,’ उनले भने।
उनले प्रधानमन्त्री ओली असफल भइसकेको दाबी गरेका छन्।सरकारले कोरोना नि यन्त्रण तथा रोकथाममा काम गर्न नसकेको भन्दै उनले आलोचना गरेका छन्। किसानले मल नपाएको र ऋण लिएर हजारौं युवाले गरेको व्यवसाय संकटमा परेका बेला पनि सरकारले सहयोग नगरेको थापाको भनाइ छ।सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीले जनअपेक्षाअनुसार काम नगरेको पनि उनले बताएका छन्। उनले आफूहरू सरकारलाई खबर दारी गर्न सडक प्र दर्शनमा उत्रिएको थापाले बताए। ‘सडक खाली हुन हुन्न। सडक प्रतिपक्षको हो,’ उनले भने।
Tagged प्रधानमन्त्री ओली नाङ्गै सडकमा हिँडिरहनु भएको छ । सडक प्रतिपक्षको हो ? गगन थापा '' पूरा पढ्नुहोस।
श्री कालिन्चोक भगवती को दर्शन गरि मङ्सिर २९ गते सोमबार को पूरा राशीफल हेर्नुहोस । भेटी स्वरुप ॐ लेखी शेयर गर्नुस अकास्मात धन लाभ हुनेछ
किन आयो विश्वभरि नै युट्युब, गुगल, जिमेल फेसबुक लगायतका एपमा समस्या , आफ्नो अकाउन्ट् कसरी सुरक्षित राख्ने !पूरा पढ्नुहोस।
असहयोग र घेराबन्दीका कारण संसद विघटन प्रधानमन्त्री ओली पूरा पढ्नुहोस
December 21, 2020 December 22, 2020 news21nepal
कक्षा १२ को परीक्षा अनलाइनबाट पनि दिन सकिने, कसरी सभागी हुने , पूरा हेर्नुस ।
November 4, 2020 news21nepal
गजुरेल माया-मोह ! पूर्वपत्नीविरुद्ध कानुनी उपचारको तयारीमा पूरा पढ्नुहोस ।
December 15, 2020 news21nepal